Sidina New London avy any New York, Denver, San Francisco ary Boston amin'ny United Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina New London avy any New York, Denver, San Francisco ary Boston amin'ny United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina New London avy any New York, Denver, San Francisco ary Boston amin'ny United Airlines.
Londres no toerana iraisam-pirenena voafandrika be indrindra ho an'ny mpanjifan'ny orinasa United tamin'ny volana oktobra, ary manantena ny hitohy amin'ny taona 2022 ity zotram-piaramanidina ity.
United Airlines dia manambara sidina dimy vaovao avy amin'ny tanàna efatra any Etazonia mankany London Heathrow Airport.
United Airlines dia hanolotra sidina 22 isan'andro mankany London, Royaume-Uni amin'ny lohataona 2022.
Raha vao manomboka ny serivisy, United dia hanolotra sidina bebe kokoa eo anelanelan'i New York City sy London noho ny mpitatitra amerikana hafa.
United Airlines androany dia nanambara fa manampy sidina dimy vaovao ho an'ny London's Seranam-piaramanidina Heathrow, ahitana sidina roa hafa avy any New York/Newark, fitsangatsanganana fanampiny avy any Denver sy San Francisco, ary koa sidina mivantana vaovao avy any Boston. Manomboka amin'ny volana martsa 2022 ny serivisy vaovao ary miaraka amin'ireo fanampiana ireo, i United no hany mpitatitra amerikana hanolotra serivisy tsy an-kiato eo amin'ireo tsenam-barotra fito ambony indrindra ao amin'ny firenena sy London. Hanolotra sidina 22 isan'andro avy any Etazonia mankany London i United, ary sidina bebe kokoa eo anelanelan'i New York City sy London noho ny mpitatitra amerikana hafa. Londres no toerana iraisam-pirenena voafandrika be indrindra ho an'ny mpanjifan'ny orinasa United tamin'ny volana oktobra, ary manantena ny hitohy amin'ny taona 2022 ity zotram-piaramanidina ity.
"Nandritra ny 30 taona teo ho eo, i United dia nanome rohy manan-danja eo amin'i Etazonia sy London, mitazona serivisy mandritra ny areti-mifindra ary mampitombo stratejika ny fandaharam-potoanantsika mba hitazonana ny mpanjifantsika amin'ireo ivon-toeram-pandraharahana eran-tany mifandray," hoy i Patrick Quayle, filoha lefitra zokiolona iraisam-pirenena. tambajotra sy alliance at United Airlines. "Londres dia ampahany manan-danja amin'ny tambajotran'i United ary matoky izahay fa hitombo hatrany ny fitakiana, indrindra rehefa miverina ny dia ara-barotra iraisam-pirenena amin'ny 2022."
Ireo sidina vaovao ireo dia miorina amin'ny United lehibe indrindra-efa trans-fanitarana Atlantika nambara tamin’ny fiandohan’ity volana ity. United dia manao sidina fito amin'izao fotoana izao mankany Heathrow avy any Etazonia: sidina roa isan'andro avy any New York/Newark sy Washington DC, ary sidina iray isan'andro avy any Chicago, Houston, ary San Francisco. Amin'ny volana Desambra, hitombo ho sidina 10 isan'andro ny serivisy, miaraka amin'ny sidina fanampiny avy any New York/Newark sy Chicago, amin'ny fotoanan'ny fialantsasatry ny ririnina.
Ny sidina dimy vaovao dia hanamora ny fitsangantsanganana amin'ny dobo ary hanamora kokoa ho an'ny mpanao fialam-boly sy ny mpanao dia lavitra, toy ny United Airlines dia:
Manomboha sidina vaovao isan'andro avy any Boston dia niasa tamin'ny Boeing 767300ER premium an'ny United, izay ahitana seza 46 United Polaris kilasy fandraharahana ary seza toekarena premium 22 United Premium Plus®.
Tohizo ny sidina isan'andro avy any Denver ary ampio sidina faharoa isan'andro ampiasain'ny Boeing 787-9.
Ampio ny sidina fahenina sy fahafito isan'andro avy any New York/Newark, izay samy hotanterahin'ny Boeing 767-300ER premium an'ny United ary mamela ny serivisy isan'ora amin'ny hariva.
Ampio sidina fahatelo isan'andro avy any San Francisco tantanan'ny Boeing 787-9.
Tohizo ny serivisy isan'andro mankany London avy any Los Angeles.